Date My Pet » 5 Nzira Yokuwana Rudo Hwenyu!
Last updated: Jan. 17 2021 | 2 Maminitsi verenga
Tose nguva dzose, kana asingafungi zvakakwana kana nokungwaririra, wakarindira mumwe. Kuti munhu tinogona kugoverana upenyu hwedu uye ndiani kutimisa kutsungirira njodzi vapenyu mune sandara pamwe Fluffy katsi. Hedzinoi chete shanu nzira kudzivisa kuti mugumo uye kuva uwandu katsi zvokudya vasingaverengeki kuripa!
Ita A Night Class
Common kufarira ndiyo kiyi pano. Kana iri mifananidzo kana rokusika kunyora, nguva dzose sarudza kirasi usiku iyo chinayo zvaunoda. Njere guru chinhu kana totaura nokuwana soulmate. Unofanira kuwana mumwe ndokusaka mhando dzakawanda inotonhorera gravitate kuna mumwe uye vazhinji saka eccentrics kunyarara gravitate kune mumwe. Saka kana ukasarudza boka usiku iyo iwe pachako uri kurifarira kunowedzera mukana wokuti uchasangana vanhu kungofanana pachako.
Vakawanda vanhu havafaniri kukwira mumwe mbariro netsvimbo semuri zvikuru zvino nokuti vanotya vanhu angafunga vari zvinokambaira kana chinhu. Asi ivo vachiri anoisa apo rudo kunogona maruva. Sezvo zvokunwa runoyerera vanhu havafaniri vanowanzopedzisira kunetseka hafu zvakawanda chii vanhu kufunga kwavo kana kunetseka zvakanyanya kudini kuitira kuti mupfungwa vachiri nzvimbo huru kusangana vanhu. Zviri pachena handidi zano kuenda kumba navo kuti usiku asi tora nhamba yavo. Zvingava kutanga chinhu.
Basa iri apo vakawanda vanhu vanowana rudo upenyu hwavo sezvo kuchifinha sezvo zvinoita. Saka edza kuva basa waunoda kana uchigona uye pane mukana hombe iwe uchava tinya nemunhu waunoda. Uye kana uchinyara vakavapoteredza, usanetseke. Kana zviri zvaireva kuti zviitike, richafa kuitika. Uye kana kwete, pane zvakawanda zvikuru hove mugungwa sezvo vachiti.
The gigging redunhu zvakazonaka pamusangano vanhu. Zvakafanana kubhawa redunhu chete kuti unogona isununguke nokutaura zvakadai sokuti, “Ndaifarira kuti riff iwe taitamba.” Zviri nyore chaizvo nzira kundosangana nomumwe uye mijenya shamwari munzira zvakare saka kudzidza chiridzwa, kana musingadi nechakare kutamba nomumwe, uye kubuda imomo uye vamwe s.
Regai Aionekwa Desperate
Ini zvawanyora nzira ina idzo kusangana mumwe asi zvimwe rokupedzisira chinonyanya kukosha. Unofanira nechokwadi urege kuuya kuyambuka sezvinoita hwako inotenderera kuwana munhu acharipedzisa. Onai kuti iwe nezvizhinji kuitika muupenyu hwako uye kuti musangano munhu chete chikamu chimwe basa renyu, kwete yose basa. Nemamwe mashoko unofanira kuratidza kuti uri simba zvakakwana kurarama Fluffy vari sandarara kunyange kana zvisiri sei chaunochiva kwokufungidzira ramangwana rako. Aionekwa chivimbo mune pachako ganda rako. Hapana ukwezve.